DHAGEYSO: Farmaajo oo ka laabtay Muddo kordhintii loo sameeyey – XAMAR POST
DHAGEYSO: Farmaajo oo ka laabtay Muddo kordhintii loo sameeyey
Abaare 1:10 saqdii dhexe Xalay ayuu Telefishinka Dawlada sii daayey Khudbad lawada sugayey oo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Shacabka ujeedinayey,isagoo ka hadlay Xaalada dalka,Cabsida dagaal ee jirtay iyo Doorashada marxaladaheeda maadaama bud dhig u aheyd khilaafka jiray.
Inuu sheegay bilowga Hadalkiisa Doorasho in dalka laga qabto ayuu ku eedeeyey dhinacyo dano gaar ah iyo Dawlado shisheeye hor istaageen qabashada Doorashadaasi,inkastoo madaxweynuhu magacaabin dadka doorashada diiday in dalka ka dhacdo.
Farmaajo ayaa sheegay in ay ogol yihiin dib ugu laabashada Doorasho lagu saleyn doono dhaqan gelida Heshiiskii 17 September 2020 la gaaray taas oo ka micno aheyd inuu ka laabtay Muddo kordhintii 12-kii bishaan Golaha Shacabka usameeyeen Hay’adaha Federaalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku laab qaboojiyey Shacabka cabsida dagaal qabay in aysan Dawladu dooneyn dagaal laga rido Caasimada taasi uu ku sheegay inay doorteen bad baadinta Rayidka iyo Hantida Magaalada.
Dawlada Soomaaliya ayaa ku dhaleeceysay Murashaxiinta Madaxweynaha raadinaya inay ka shaqeenayaan bur burinta Nabada iyo Dawladnimada lasoo dhisay,iyadoo Farmaajo uu sheegay in xal ka gaarista Khilaafka Doorashada jira awgeed uu 1 Bisha May oo Sabtida ku beegan Golaha Shacabka hortegi doono,si uu ugala hadlo Arinta kusaabsan Doorashada iyo isbadelada wada hadalka loo weecanayo.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Muddo xilleedkiisa dhamaaday oo khudhawaad 8 daqiiqo khudbadiisa aheyd ayaa sheegay in Shir ugu baaqayo si deg deg ah iskugu yimaadaan Saxiixayaashii Heshiiskii doorasho ee la gaaray 17 September si dalka loo bad baadiyo.
Ismiidaamin lagu weeraray Xarunta Asluubta Ee Muqdisho
Dhul gariir saaka oo Arbaco ah ku dhuftay Dalka Hindiya